Sida loo Daawo Hulu on kasta Popular TV Si fudud
> Resource > Video > Sida loo Daawo Hulu on TV
Haddii aad qabto TV a smart, waa fikrad aad u fiican in la sii qulquli filimada Hulu iyo barnaamijyada telefishinka ku TV shaashad weyn noqon doonaa. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad TV ma laha ka dhisay-in codsigaaga Hulu, weli waxaad daawan kartaa Hulu on TV si fudud iyadoo la kaashanayo weyn Wondershare Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ).
App Tani waa inaad kala soo baxdo Hulu videos in TV qaabab socon for loo maqli siman awood. Ogow in haddii aad hore u lahaa badan oo Hulu videos on PC (ama videos ka mid ah ilaha kale) oo aad rabto inaad iyaga ciyaaro TV, weli aad u baahan tahay si ay u badalo si aad TV taageeray qaabab. Taasi waa sababta oo ah inta badan videos on suuqa maalmahan la socon karin telefishin oo kala duwan. Ok, hadda, i sii daa aan ku tuso sida uu u daawado Hulu on TV.
1 Download Hulu videos for TV
Marka hore, download, rakibi oo ay maamulaan app this. Markaas, waxaad tagtaa website Hulu oo heli videos aad rabto in aad kala soo bixi, waayo, TV. Ugu dambeyntii, dib barnaamijkan ee download interface. Wakhtigan, aad leedahay laba siyaabood oo kala duwan si ay u soo bixi Hulu videos for aad TV.
Mid ka mid ah waa in guji Download icon ee dhinaca kore ee midigta ah Hulu video online. Kale waa in la guji URL ku dar in this app ee download interface inay jiraan nuqul ka URL video ah.
2 Beddelaan Hulu in TV
Ka hor inta aanad bilaabin diinta Hulu videos for TV, waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay soo dhoofsadaan ka soo bixi Hulu videos in ay leeg- tahay diinta this app ee. Si aad u samayn, kaliya tago maktabadda ayaa ku dhameysatay, xaq guji videos aad rabto, iyo dooro "Beddelaan in" doorasho.
Markaas, waxaad tagtaa guddi Qaabka Output ah. Halkan, waxaad dooran kartaa waxa aad rabto. Haddii TV iska leh mid ka mid ah TV Samsung, Sony TV, LG TV iyo Panasonic TV, ka tago si Device> TV'yada, ka dibna model TV aad. Qaabka ugu fiican ee aad TV.
Wixii TV Apple, waxaad dooran kartaa in aad model TV Apple ka Device ah> Apple category.
3 Play Hulu on TV
Ugu geeska hoose ee garabka midig ee suuqa kala barnaamijkan, waxaad u baahan tahay inaad ku dhuftay button badalo si ay u bilaabaan diinta video.
Ka dib markii diinta, ka heli video file ka badaley adigoo riixaya badhanka Folder Open hoose ee suuqa kala this. Ugu dambeyntii, video wareejiyo si aad TV via qalab USB ah loo maqli karo.